Gugulu kwuwaputara na Smart New Allo Messaging App | Gam akporosis
Google gosipụtara Allo, ngwa ọhụụ ọhụụ eji eme ihe nke dabere na nọmba ekwentị gị
Google na-eweputa akụkọ niile kachasị mma maka afọ kemgbe Google I / O 2016. Anyị amalarị nke ahụ ihe dị arọ nke ukwu ga-ada gbasara nkwukọrịta na sistemu ọhụrụ yana nke a bụ Allo.
Allo bu ozi ohuru nke Google jikọọ na nọmba ekwentị gị kama ozi email dị ka Hangouts. Allo pụtara maka ijikọta ụfọdụ atụmatụ ndị na-adọrọ mmasị maka amụma nke nzaghachi ngwa ngwa, Enyemaka Google na akwụkwọ mmado. Ọ gụnyekwara ikike ịmụba etu ederede siri dị ike iji mekwuo ozi anyị chọrọ.
Njirimara nke mepee ederede, ma ọ bụ ọbụna belata nha ya, na-abịa na ebumnuche ya na Allo iji mee ka ọ bụrụ ngwa mmetụta uche yana ọtụtụ atụmatụ ndị na-aga n'ụzọ ahụ. Site na mmịfe anyị nwere ike ịba ụba nha. Enwekwara ọnụ ọgụgụ dị ukwuu na akwụkwọ mmado na Allo ma a ga-ahụ ha nha otu nke anyị ahaziri ihe mmịfe ahụ.
Allo chọrọ ka ọ dịrị gị mfe ịza ahịrịokwu ma ọ bụ ajụjụ ụfọdụ onye ị na-agwa okwu ga-ajụ ya. N'ụzọ dị otú a, ị ga-enwerịrị zaa otu pịa. Nghọta onyonyo ga-abata ebe a ka anyị nwee ike ịhọrọ n'etiti azịza atọ na onyonyo efere onyinye.
Google Assistant na-eme ka ọnụnọ ya dị ka ọrụ bụ isi yana metụtara bots na nkata. Inyeaka na-enye gị banye ọrụ Google na data site na otu nkata. Bot ahụ ga-elekọta ịhapụ data data, foto, na ozi ndị ọzọ maka onye ọ bụla ịhụ.
Ma ọ bụ na Google nnyemaaka ga-enye gị ohere inwe mkparịta ụka sitere n'okike nke azịza na ajụjụ ga-adị ngwa ngwa dịka a ga - asị na anyị na - agwa mmadụ.
Google chọkwara tinye nkwusi ike na nchekwa na mkparịta ụka niile ezoro ezo na ike ịmepụta mkparịta ụka na ọnọdụ incognito. Ọ ga-adị n’oge ọkọchị, yabụ na enwebeghị ntakịrị ntakịrị iji tinye ngwa a na ekwentị anyị. Ọ dị ịtụnanya, enwere ike ịsị ugbu a na keyboard nke Google bidoro n'izu gara aga na iOS bụ ụdị Allo ga-ebelata.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Google gosipụtara Allo, ngwa ọhụụ ọhụụ eji eme ihe nke dabere na nọmba ekwentị gị
Duo bụ ngwa oku vidiyo ọhụụ maka gam akporo na iOS nke na-elekwasị anya na ịdị mfe nke ojiji
Rom kachasị mma maka Samsung Galaxy S6 Edge Plus a na-akpọ NoNaMe Rom v5, anyị na-egosi gị otu esi etinye ya !!